Ipeyinti yeWatercolor yeeDummies Cheat Sheet
Ipeyinti ye-Watercolor ikuvumela ukuba ujonge umhlaba wombala ngokwembono eyodwa emanzi, kodwa, ekugqibeleni, ubukhulu becala ngumbala. Kuya kufuneka uqhelane nevili lemibala kunye nemibala yayo ephambili kunye nehambelana nayo. Kuya kufuneka ukwazi ukugweba amaxabiso ombala (ukukhanya ukuya kumnyama, kungabizi ngexabiso eliphantsi), kwaye kufuneka ukhethe ipeyinti yombala wamanzi kunye nombala ngokokukhetha kwabo.
Ukujikeleza ivili lemibala yokupeyinta i-watercolor
Ipeyinti ye-Watercolor incinci malunga namanzi kwaye incinci ngombala. Unokufumana amanzi kwiindawo ezininzi, kodwa ukwazana nevili lemibala kungathatha ixesha elingaphezulu. Ivili lemibala libonisa imibala ephambili-ebomvu, emthubi, naluhlaza-kunye nemibala emininzi abanokudibanisa ukuyenza. Imibala ephambili sisiseko salo lonke elinye umbala, kwaye ngekhe wenze ii-primaries ngokudibanisa eminye imibala.
Sebenzisa ivili lemibala ukukhetha inkqubo yokupeyinta umbala, xuba iifomula zombala, kwaye wenze indibaniselwano yemibala. Ungathathi hlangothi umbala (wenze ungakhazimli kangako kwaye ubonakale ngokwendalo- ukuya ngwevu) ngokuwuxuba kunye nokuhambelana kwawo, ufumene ngokuchasene nawo kwivili lemibala.
Ngaba i-xanax ikwenza ukuba unciphise umzimba?
Ukuvavanya ixabiso lombala lokupenda i-watercolor
Umbala ixabiso amanyathelo apho iwela kuluhlu phakathi kobumnyama nokukhanya. Ixabiso lilungu elibalulekileyo lokupeyinta i-watercolor. Unokufuna ukumisela ixabiso lombala ukwenza iipateni eziqinisekileyo zexabiso. Nangona kunjalo, umbala ngokwawo ungathatha ingqalelo yakho, okwenza kube nzima ukufumanisa ixabiso.
Ukunceda, uprinte le tshathi yexabiso lilandelayo (isitokhwe sekhadi elimhlophe iya kuba lukhetho olufanelekileyo), emva koko usebenzise ipokotho yomngxunya ukwenza umngxunya kwisangqa ngasinye kwitshathi. Squint ngokusebenzisa imingxunya ukunciphisa umbala ojonge kuwo kungwevu kwaye umisele ixabiso lawo. Tshatisa umbala kunye nexabiso lesikwere ngokujonga umbala emngxunyeni. Hambisa isikwere sexabiso phezulu nasezantsi de ixabiso elichanekileyo lihambelane nombala kumngxunya.
idosi yevanvanse ngokobunzima
Ngokwazi ixabiso elifanelekileyo unokuxuba imibala echanekileyo, uyilo lweepateni zomsebenzi wakho, kwaye useke iindawo ezinomdla ngokujolisa kwizibane ezikhanyayo ngokuchasene nobumnyama.
Ukuthabatha imibala yepeyinti yokupenda i-watercolor
Ukukhetha iipeyinti oza kuzisebenzisa ekwenzeni i-watercolors yinto ebaluleke kakhulu kunye nonyango olukhulu. Xa uthenga iipeyinti ze-watercolor okwesihlandlo sokuqala, phrinta le tshati yombala ilandelayo kwaye uhambe nayo. Ishati ibonisa nje imibala embalwa ephambili ekhoyo, kodwa inokukunceda ukhethe umbala omnye ophambili kudidi ngalunye lombala wokhetho ukuze wenze iphalethi entle enemibala emithandathu. Ukusuka kuloo mibala mithandathu, unokwenza amakhulu, mhlawumbi amawaka, abanye.
Ukukhetha i-watercolor pigments ngokombala webala
Umbala ngamnye obomvu-obomvu, omthubi, nohlaza okwesibhakabhaka-uthathile, oko kuthetha ukuba uncike komnye wemibala emibini ephambili. Xa uxuba iipeyinti ze-watercolor ukufumana umbala owesibini-orenji, oluhlaza, okanye omfusa- sebenzisa iiprimaries ezimbini ezithandanayo. Ngaphandle koko, ufumana umbala ongwevu, onodaka.
Iphilisi emhlophe d 02
Umzekelo, ukufumana umbala omfusa, qiniseka ukudibanisa ibala eliluhlaza okwesibhakabhaka ngokubomvu njenge-ultramarine eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nokubomvu okubomvu kohlaza okwesibhakabhaka njenge-alizarin crimson. Xa uxuba imibala, bhekisa kolu luhlu lulandelayo:
Iingqombela nge-blue bias: I-alizarin krimson, i-carmine, ichibi elibomvu, i-magenta, i-opera, i-rhodamine, i-rose madder, ichibi elibomvu
njengezingxobo ezimfusa nezimhlophe
Ingqombela enomkhethe otyheli: I-cadmium ebomvu, i-chlorine para ebomvu, i-chrome orange, i-oxide ebomvu yesiNgesi, obomvu obomvu, obomvu waseNdiya, obomvu obomvu, obomvu ngokusisigxina, obomvu we-perylene, obomvu i-phioxine, ichibi elibomvu, i-red lead, ebomvu ebomvu, i-venetian ebomvu, i-vermillion, i-Winsor ebomvu
Amthubi ngohlobo oluhlaza okwesibhakabhaka: i-aureolin, i-azo, i-cadmium ye-lemon etyheli, i-cadmium mthubi ophuzi, i-Flanders etyheli, ilamuni emthubi, ukukhanya okumthubi okusisigxina, ityheli ephambili, I-Winsor mthubi, mthubi
Amthubi anombala obomvu: I-aurora mthubi, tyheli eqaqambileyo, cadmium mthubi ophakathi kunye nobunzulu, i-chrome, inyongo, igolide etyheli, indiya etyheli, iMars etyheli, iNaples etyheli, isigxina esimthubi esiphakathi kunye nobunzulu, i-sienna eluhlaza, iSahara, ichibi elityheli, i-ocher etyheli
Iiblues ezinomkhethe obomvu: ukukhanya, i-cobalt, i-cyanine, i-indigo, intaba eluhlaza okwesibhakabhaka, i-ultramarine eluhlaza okwesibhakabhaka, i-verditer eluhlaza okwesibhakabhaka, i-Victoria eluhlaza okwesibhakabhaka
Iiblues ezinomkhethe otyheli: I-Antwerp, cerulean, compose, blue blue, manganese, monestial blue, Paris blue, peacock blue, phthalocyanine blue, Prussian, Rembrandt, speedball, touareg, turquoise, Winsor luhlaza
ukuseta njani izinto eziluncedo
Yintoni ihydrocodone apap 5 325
I-promethazine codeine isiraphu yedosi
indlela yokucoca i-aerator yompompo
elinye igama le-metformin
indlela yokuphelisa izilonda ezinyaweni